Izindaba - Siyakuhalalisela ngo-11kv no-33KV abaguquli bethu bamanje nabamandla kagesi abadlulisa ukuhlolwa kwe-KEMA
Siyakuhalalisela ngo-11kv no-33KV abaguquli bethu bamanje nabamandla kagesi abadlulisa ukuhlolwa kwe-KEMA
I-KEMA yisifinyezo sesiDashi (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Ububanzi bebhizinisi le-KEMA landa kancane kancane, Futhi laba yisiphathimandla esizimele esihola phambili embonini yezinsizakalo zamandla omhlaba. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-80, i-KEMA isiza amaklayenti ukubikezela inkomba yoshintsho nokuxazulula izinselelo eziyinkimbinkimbi zamandla nezinsiza. Idlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukutholakala, ukwethembeka, ukusimama kanye nenzuzo yemikhiqizo nezinqubo ezihlobene namandla.
Kumaphrojekthi wezinsizakalo ezahlukahlukene, i-KEMA idlala indima yokuba ngunjiniyela, umxhumanisi webhizinisi, inqubo kanye noshintsho kwezobuchwepheshe. Kusuka kumasu wezobuchwepheshe, wokuphatha kanye nokuhlela kuya ekwakhiweni kobunjiniyela, inqubo nokusebenza kokuqaliswa kokusebenza kanye nokuhlola, njll. Futhi imboni yezinsiza ukuhlinzeka ngezixazululo eziphelele zebhizinisi nezobuchwepheshe.
IKEMA izinze e-Arnhem, eNetherlands, inamagatsha emazweni angama-20 emhlabeni jikelele. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili, ikhwalithi, ubuqotho, ukuthembeka kanye nolwazi lobuchwepheshe kube ngamanani ayisisekelo we-KEMA.
I- Amandla we-11kv no-33KV nama-transformer amanje ekhiqizwa ifektri yethu yenguqu isidlulise isivivinyo se-KEMA futhi yathola umbiko wokuhlolwa kwe-KEMA.
Singumkhiqizi kagesi eChina. Ngakho-ke, yonke imikhiqizo yethu ikhiqizwa ngokuqinile ngokwe-ISO9001 & KEMA, futhi sithumela emazweni angaphezu kwama-30 futhi banelisekile ngekhwalithi yethu nangemva kwensizakalo yokuthengisa.
Uma udinga, ungaxhumana nathi ngemiphumela yokuhlolwa kwe-KEMA yama-transformers ethu kanye nekhathalogi yethu yomkhiqizo.
Sibheke phambili ekwakheni ukuxhumana nawe futhi sithuthuke ndawonye.